Fanapariaham-pahefana :: Mihamidina ny fanapahan-kevitra amin’ny tetikasam-panjakana • AoRaha
Fanapariaham-pahefana Mihamidina ny fanapahan-kevitra amin’ny tetikasam-panjakana
Tsy ho mpanapa-kevitra samirery amin’ny tetikasa fampandrosoana intsony ny rafitra mpanatanteraka. Ho tompon’antoka tanteraka amin’ny famaritana an’ireo fandaharanasa ao amin’ny faritra misy azy ny governora sy ny lehiben’ny distrika ary ny solombavambahoaka. Io no isan’ny toromarika sy hevi-dehibe nivoatra tao anatin’ny fanitsiana ny Tetibolam-panjakana 2020.
«Lamina vaovao, ohatra, ny fanomezana ny tsenan’ asam-panjakana. Ho tompon’ andraikitra feno amin’ny famaritana an’izay asa hatao ireo mpitantana eny ifotony, na dia volan’ny minisitera aza no hampiasana amin’ireo fanorenana fotodrafitrasa, toy ny sekoly sy hopitaly. Ny fiaingan’ny fampandrosoana eny ifotony no lalan-tsaina vaovao hapetraka eto amin’ ny firenena, araka ny toromarika nomen’ ny Filoha», hoy ny minisitry ny Toekarena sy ny tetibolam-panjakana, Randriamandrato Richard.
Handalo fankatoavana amin’ireo ambaratongampahefana avokoa, araka izany, vao azo tanterahina ireo fandaharan’asam-pampandrosoana vinavinain’ny fitondram-panjakana. Notsipihin’ny minisitry ny Toekarena sy ny vola fa: «ireo solontenam-panjakana sy ireo olom-boafidy ihany no tena mahalala ny filàn’ireo mponina any amin’ny toerana iadidiany”.
Fomba fiasa vaovao no hapetraka ho fampiharana an’izany paikady vaovao izany. «Hojerena ny lalàna hahafahana manatanteraka azy, satria efa misy ihany koa ny teti-bola natokana ho an’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana», hoy ihany ny minisitry ny Toekarena sy ny vola.
Nampahafantarin’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, afak’omaly, fa «homena tombondahiny ireo orinasa isam-paritra na isaky ny distrika amin’ny fanomezana ny tsenan’ asam-panjakana. Homena tombondahiny, hoy izy, ireo orinasa malagasy».
Fandikan-dalàna :: Solombavambahoaka dimy arahi-maso
Fahaverezana any an-dranomasina :: Sambo nitondra mpanjono efatra tsy hita popoka